Sida loo Helo Noocyada CSS ee aan la adeegsan ee ku yaal xaashidaada Styleset | Martech Zone
Sida loo Helo Noocyada CSS ee aan la adeegsan ee ku yaal xaashidaada Stylesheet
Arbacada, Agoosto 8, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
In kasta oo waraaqahaaga qaabab la keydiyay, haddana markii ugu horreysay ee qof soo booqdo bartaada faylka CSS oo buufsan ayaa runtii gaabin kara boggaaga. Tani aad uma fiicna aragti hore. Maaddaama bogagga ay koraan, waxay u muuqdaan inay ku ballaadhiyaan aaladda cusub iyo walxaha ay naqshadeeyayaashu sii wadaan inay si fiican u hagaajiyaan oo ay la socdaan xulashooyin badan oo moodello ah. Waqti ka dib, xaashida qaab-dhismeedkaagu wuu is beddeli karaa wuxuuna qayb muhiim ah ka noqon karaa sababta bartaadu u soo dejiso gaabis kuwa kale.
Waxaan ku arkay aaladaha kale ee hubinta CSS shabakada. Waan adeegsanay Nadiifi CSS si loo yareeyo cabirka feylka iyadoo sifiican loo abaabulayo loona yareeyo xogta ku jirta. Markaad isticmaaleyso dhinac saddexaad inaad falanqeyso boggaaga, waa inaad taxaddar muujisaa, in kastoo. Haddii ay xoqdaan hal bog oo ay falanqeeyaan CSS-gaaga, qalabku wuxuu kaa caawin karaa inaad ka saarto yaraynta tanyada qaababka ah ee loo adeegsado bogagga kale.
Xaalku maaha CSS aan la adeegsan - qalab ah in Andrew Baldock laga bilaabo Mindjet, a maareynta maskaxda codsi, ayaa i tusay shalay. Qalabka ayaa gurguuranaya bartaada wuxuuna tilmaamayaa CSS aan la adeegsan. Xitaa waad hubin kartaa qaababka aad rabto inaad ilaaliso iyadoo aan loo eegin falanqaynta. Si aad kor ugu qaaddo, waxaad kala soo bixi kartaa xaashida qaab-dhismeedka ka dib markay ku socoto hawl-qabad-yar-yar.
Douglas Karr on Edge ee Webka Raadiyaha
Shaqada xun ee SEO!